Dhismaha jidka Muqdisho-Afgooye oo dar dar ku socda & arrin CEEB ku ah dadka Muqdisho oo aan kusoo aragnay + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka Dhismaha jidka Muqdisho-Afgooye oo dar dar ku socda & arrin CEEB ku...
Dhismaha jidka Muqdisho-Afgooye oo dar dar ku socda & arrin CEEB ku ah dadka Muqdisho oo aan kusoo aragnay + Sawirro
(Muqdisho) 25 Agoosto 2019 – Sidaan shalay qornay waxaa dar dar dib ugu bilowday dhismaha jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye oo qayb ka ah mashruuc ballaaran oo lagu dhisayo jidka Jowhar-Muqdisho-Afgooye, kaasoo ay maalgelisey Dowladda Qadar.
Waxaa gaadiidka Birta Culus dhex ordaya injinneerrada dhismaha iyo Geometry-ga oo iskugu jira Soomaali iyo Turki, kuwaasoo cabbiraya tillaabo kasta oo la qaadayo, waxaa dheer ciidamada cusub ee Booliiska ah ee uu Turkigu diyaariyay ee goobta la geeyay, sida aannu goobta kusoo aragnay.
Yeelkeede, waxaannu cadadkii shalay ku xusnay in qashin la dhigayo bartamaha isla jidkii uu dhismuhu ka socdey, waxaana saaka oo uu Hadalsame markale goobta tegey uu soo arkay qashinkii oo jidka dhexdiisa laga qaaday, balse la dhigay jidka dhiniciisa, goobtii loogu tala galay in laga dhiso cag-daaliska ama marshabiyeediya.
Arrintan ayaa weji gabax ku ah umadda meesha deggan iyo xitaa DF Somalia, gaar ahaan Maamulka Degmada dhismuhu ka soconayo iyo guud ahaan Maamulka Gobolka Banaadir iyo xitaa shacabka Muqdisho.
Previous articleGOOGOOSKA: Udinese vs AC Milan 1-0 (Milan oo bilowgiiba la tumay)
Next articleWargaysa Ugandan ah oo ku faanay guusha Jen. Odawaa (Baro inta tababar ee uu qaatay)